Chelsea Oo TODDOBA Daqiiqo Guul Kaga Soo Gaadhay Cardiff Oo Inta Badan Ee Kulanka Hoggaanka Haysay & Azpilicueta Iyo Loftus-Cheek Oo Dhabarka Saartay Masuuliyada Kulan Maurizio Sarri Galaafan Lahaa. - Gool24.Net
Chelsea Oo TODDOBA Daqiiqo Guul Kaga Soo Gaadhay Cardiff Oo Inta Badan Ee Kulanka Hoggaanka Haysay & Azpilicueta Iyo Loftus-Cheek Oo Dhabarka Saartay Masuuliyada Kulan Maurizio Sarri Galaafan Lahaa.
Kooxda Chelsea ayaa guul soo laabasho cajiib ah ka gaadhay kooxda Cardiff City kulan xiiso badan oo ka qabsoomay gegida Cardiff isla markaana kooxda martida loo ahaa ay ahayd mida inta ugu badan hoggaanka kulanka u haysay.
Camarasa ayaa hoggaanka u dhiibay Cardiff daqiiqado kaddib qaybtii dambe balse iyadoo kulanka ay wax yari ka hadheen ayay Blues goolal ka heshay Azpilicueta iyo Ruben Loftus Cheek oo sahlay guul muhiim ah.
Shaxihii Kulankan Ee Labada Kooxood
Chelsea ayaa kulanka ku bilaabatay iyada oo ah kooxda fiican, Pedro Rodriguez ayaa daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta darbadii ugu horreysay ee halis ah meel xerada ganaaxa ka baxsan kaga laagay goolka Cardiff balse kubadda ayaa wax yar u martay birta sarre.
Cardiff ayaa markeeda weerar qaaday, Murphy oo garabka midig kasoo xarooday isla markaana kubadda ka farsamaystay xiddigaca Chelsea ayaa ku dhawaaday inuu gool cajiib ah dhaliyo isaga oo aan wax dhaqaaq ah samayn goolhaye Kepa laakiin darbadiisa ayaa ahayd mid gees martay goolka.
Intaa kaddib kulanka ayaa noqday mid fursaduhu yaraadeen labada kooxood ayaana u muuqday kuwo in badan kala taxadiraya.
Chelsea ayaa si weyn looga dareemayay maqnaanshaha xiddigaha muhiimka ah ee kooxdeeda ee Hazard iyo Kante oo aan kulankan kusoo bilaaban waxaana ay ahaayeen kuwo aan wax halis ah oo weyn abuurayn.
Willian ayaa daqiiqadii 38-aad ee kulanka markiisa sameeyay darbad uu kasoo tuuray meel durugsan, 2=30 jirkan ayaan laagiisa ku beegsan goolka balse wax aan badnayn u mariyay goolka.
Kahor dhammaadka qaybta hore, Alonson iyo Camarasa oo labada dhinac ka kala socda ayaa darbado halis ah ku tuuray goolasha balse ku fashilmay inay jabiyaan is mari waaga labada dhinac.
Qaybta hore ee kulanka ayaa kusoo dhammaatay bar-bardhac goolal la’aan ah oo ay labada dhinacba awoodi waayeen xataa abuurista wax halis ah oo weyn.
GOOAL: Cardiff ayaa mucjiso lasoo laabatay qaybtii dambe ee kulanka, Camarasa ayaa iyada oo aan hal daqiiqo kasoo wareegin wakhtigii nasashada kubad qurxoon ka dhaliyay cidhifka sarre ee goolka Blues isaga oo ka faa’idaystay baas ka yimid Arter.
Intaa kaddib Chelsea ayaa qaaday weeraro ay iskaga soo gudayso goolka looga hormaray waxaana fursad isla markiiba goolka ku darbeeyay Willian balse goolhaye Etheridge ayaa badbaadin sameeyay.
Intaa kaddib Sarri ayaa si deg deg ah kulanka uga saaray Pedro isla markaana soo geliyay xiddiga uu keydka kusoo bilaabay ee Hazard.
GOOAL: Kaddib wakhti dheer oo ay Chelsea usoo dagaalamaysay iska soo gudista goolka looga horreeyay ayuu ugu dambayn Azpilicueta kubad madax ah dhex dhigay goolka Cardiff, Kubadda ayaa ahayd gees ka laad uu soo tuuray Willian waxaana madaxa kusoo leexiyay Alonso kahor Azpilicueta.
Kaddib goolka bar-bardhaca waxa soo kordhay hammiga Chelsea ee ah inay keensato gool kale si ay dhammaan u qaadato saddexda dhibcood ee kulanka.
GOOAL: SOO LAABASHO LAYAAB LEH!!, Soo laabashada Blues ayaa dhammaystirantay waxaana daqiiqadii 91-aad gool madax ah Cardiff ku niyad jabiyay Loftus-Cheek oo karoos cajiib ah ka helay Willian.
Ugu dambayn, Kulanka ayaa kusoo dhammaaday guul cajiib ah oo soo laabasho ah oo ay gaadhay kooxda Chelsea waxaana ay sidaas ku qaateen saddex dhibcood oo muhiim ah.